Isbarbardhiga MediaLight iyo LX1 Naxaaska Nalalka - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Isbarbardhiga MediaLight iyo LX1 Naxaas Nalalka
Ma jeceshahay inaad ogaato farqiga u dhexeeya Scenic Lab's MediaLight iyo LX1? Fiiri shaxdan isbarbar-dhiga ah. Gunno ahaan, waxaan kaloo ku darnay "ragga kale!"
Dhererka 5 mitir ayaa aasaas u ah isbarbar dhiga qiimaha.
MediaLight sidoo kale waxaa ku jira qalab dheeri ah, sida xarig dheereyn ah, adabtarada AC-to-USB, shid shid shid ama xirid silig.
Labadaba MediaLight iyo LX1 Bias Lights waxay isticmaalaan PCB copper oo saafi ah, kaas oo lagu dhexdarey daaha daawaha si looga hortago qashinka Ragga kale waxay isticmaalaan daaweyn naxaas ah oo ka qaalisan. Naxaas daahir ah waa kaaliyaha kuleylka ugu fiican, waana sababta ay damaanadku ugu dheer yahay nalalka Scenic Labs.
Dammaanadda loo yaqaan 'MediaLight' waa ka sii dheer tahay maxaa yeelay waxaa jira LEDyaal badan. Laydh kasta wuxuu sameeyaa "shaqo yar." Waa kuwan matalaad muuqaal ah oo ku saabsan sida masaafada u kala duwan tahay Mk2, LX1 iyo ragga kale.